एमालेका ३ मन्त्रीको राजिनामा : मुख्यमन्त्री धरापमा ! - Kantipath.com
एमालेका ३ मन्त्रीको राजिनामा : मुख्यमन्त्री धरापमा !
कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको एमालेका तीन जना मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिँदै छन्। उनीहरुले अहिले पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा एमालेकातर्फबाट अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योगमन्त्री नन्दसिंह बुढाले राजीनामा दिएका हुन्। चैत ४ गते बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता दिएको थियो।
एमाले मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएसँगै कणाली सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद धरापमा परेका छ। अब मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत दिनुपर्ने हुन्छ।
अब कर्णाली प्रदेशसभाको ४० मध्ये २० सिट जितेको नेकपा एमाले एक ढिक्का भएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशसभा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने गृहकार्य भइरहेको एमाले स्रोतले जनाएको छ।
प्रदेशसभाको ४० मध्ये २० सांसद एमालेका छन्। सभामुख राजबहादुर शाही बाहेक १९ जनामा ओली पक्षमा १० र नेपाल पक्षमा ९ जना बाँडिएका थिए। सभामुखले निर्णायक हुने अवस्थामा बाहेक मतदान गर्न नपाउने भएकाले संसदीय समीकरणमा एमालेका १९ जना सांसद छन्।
Previous Previous post: बागमतीमा फुट्यो एमाले : अष्टलक्ष्मी संयोजक, पशुपति सहसंयोजक
Next Next post: एमालेको बागमती प्रदेश सचिवमा रचना खड्का